Mareykanka oo lagu eedeeyay in uu xado kheyraadka Soomaaliya – Madal Furan
Hoy > Warka > Mareykanka oo lagu eedeeyay in uu xado kheyraadka Soomaaliya
Mareykanka oo lagu eedeeyay in uu xado kheyraadka Soomaaliya
Editor September 29, 2018 Warka 0
Madal Furan – Waxaa deegaamo ka tirsan Soomaaliya ka jira olole xoog leh kooxo Ajnebi ah oo hubeysani ay ku boobayaan kheyraadka badda iyo dhulka ee Soomaaliya
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helikabtarka loo yaqaan ayaa waxay si toos ugu degaan deegaamo ay ka mid yihiin Gobolka Bay, Goboladda dhexe, Buuralayda Golis iyo goobo ka tirsan gobolka Soo.
Waxaa intaas barbar socoda gawaarida dheereeya ee Cabdi Bilaha loo yaqaan oo iyaguna qayb ka ah daabulida kheyraadka beriga ee Soomaaliya laga xado, waxaana jira siyaasiyiin badan oo Soomaali ah oo rumeysan in dowladda Mareykanku ay si toos u xado kheyraadka dalka Soomaaliya..
Siyaasiga Faarax Macalin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka xilli walba ay garoonka Bali doogle ay ka dhoofiso Macdanta Soomaaliya,islamarkaana si joogto ah ay u xado Kheyraadka Soomaaliya.
Ma jirto Cid xaqiijin karta hadalka Siyaasigaan laakiin dad badan ayaa horay walaac kaga muujiyay Sababta Ciidanka Mareykanka ee Badda ay saldhigga ugu weyn Afrika ay kaga sameysayaan Garoonka Balli doogle.
“Habeen kasta 3-da habeenimo dayuurado kuwa xamuulka ah oo uu Mareykanka leeyahay ayaa isku dhaafa Garoonka Caalamiga ah ee Muqdisho iyo kan Balidoogle iyagoo mugdiga ku gambanaya una socda meelo aan la aqoon,konteenaro min 40 Ft ah ayaa sidoo kale laga soo daabulaa Buur Hakaba ilaa Barawe waxa ay xadayaana waa macaadin” ayuu yiri Siyaasiga Faarax Macalin Hoggaamiyihii hore Aqlibiyadda Baarlamaanka Kenya.
Dad badan ayaa horay u sheegay in diyaaraddaha Mareykanka ay garoonka Aadan Cadde kasoo degtaan xilli Habeen ah, islamarkaana ay ka laabtaan Xilli Habeen ah.
Wax ka ogow sida Yuhuuda Itoobiya u tageen Israa’iil
Dhegeyso:- ONLF oo sheegtay inaysan marti ka noqon doonin kheyraadka dalkooda laga helay
Waraaqo sir dowladeed oo xasaasi ah oo looga tagay dukaan ku yaala Australia